किशोर नेपाल काठमाडाैं, २० साउन
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारको अवस्था टावर हराएको रेडियोजस्तो भएको छ । सरकारबारे जनताका प्रतिक्रिया के छन् ? सरकारका काम कारबाहीबारे जनता के भन्दै छन् ? यी विषयबारे बुुभ्mने दरकार छैन, सरकारलाई । सरकारका प्रवक्ता गाँजाको अमलीमा बडबडाएको जस्तो एकोहोरो आफ्ना कुरा मात्र बडबडाउँछन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कसैको कुरा सुन्दैनन् । सरकारको नेतृत्व यस्तो छ कि आफ्नै मन्त्रीहरूलाई करारपत्रमा सही गराएर मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइन्छ ।
सरकार बेरोजगारलाई रोजगार दिने नाममा मन्दिर बढार्न लगाउँछ । लौ, मन्दिर त बढार्‍याे, बढार्‍याे, रोजगारीको नाममा गल्लीको घाँस उखेल्न लगाएर भए पनि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँछ । सरकारका आसेपासे ‘झार उखेल्ने भए पनि बिरुवा गोड्ने भए पनि बेरोजगारले चार महिना मात्रै भए पनि काम त पाए’ भनेर खुसी मनाउँछन् । नेपालमा सरकारले काम नपाएका आफ्ना आसेपासेलाई रोजगारी दिने अनेक उपाय बनाएको छ ।
सडक विभागले पञ्चायतकालदेखि नै सुपरभाइजर नियुक्त गथ्र्याे । त्यो सुपरभाइजरको जम्मा दुईवटा काम हुन्थे । दिनको एकपटक कुुनै पनि समयमा सडक विभाग पुगेर हाजिर गर्नु र सुपरभाइजर बनाइदिने ‘गड फादर’को घरमा बिहान र साँझ उपस्थित हुनु ।
सरकारका सल्लाहकार अण्टसण्ट र उलजलुल काममा दिन बिताउँछन् । कोही ट्वीटरमा हल्लिरहेका हुन्छन्, कोही फेसबुकमा रल्लिरहेका हुन्छन् । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरेर भारतीय राजनीतिमा संकट ल्याऊन् कि पाकिस्तान सरकारले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत–पाकिस्तानबीच मध्यस्थता गर्ने समय आएको बताऊन्, नेपाल सरकारका सल्लाहकारलाई खासै मतलव छैन । साँच्चै, टावर हराएको रेडियोजस्तो छ यो सरकार । सरकार त वामपन्थीकै हो । तर, यसको एन्टेना न दायाँ फर्केको छ न बायाँ ।
सरकारका गतिविधिलाई सरसरती हेर्दा यसका मन्त्री साह्रै निस्पृह देखिन्छन् । तर, शासनको अंक गणित यति सरल हुँदैन त्यसैले सरकार अहिले मेलम्चीको प्रश्नमा जानै चाहँदैन । सरकारको तर्क छ, काठमाडौंका सडक अहिले यसै पनि हिलाम्मे छन् । मेलम्चीको पानी ल्याएर यी हिलाम्मे सडकलाई धुने हो भने सरकारलाई विक्षिप्त ठहर्याउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ ।
सरकारका लागि यो राम्रो अनुभव होइन । यो सबैलाई थाहा छ, एउटा ठेकेदार बाउँठियो भने पूरै सार्वभौम सरकारले चलाएको राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना मेलम्ची अलपत्र पर्छ । बुझ्नुपर्छ, जसरी सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य भूमिका हुन्छ, त्यसरी नै आयोजनाको सञ्चालनमा ठेकेदारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भनिन्छ, एउटा विदेशी ठेकेदारलाई मन्त्रीजीले मेलम्चीबाट लघारिन् । अब, मन्त्रीजीलाई मेलम्चीले लघार्दै छ । मेलम्चीको भुमरीले घेरिएका नेपाली ठेकेदारले ठेक्का सकारे पनि निर्माण सकारेका छैनन् ।
मेलम्चीको पानी सुरुङभित्र कसरी छिर्‍याउने ? यही तर्कमा खेलेर मन्त्रीले वर्षौं बिताए । मेलम्चीको मेलो भनेकै मन्त्रीले राम्रो गाडी चढ्नु हो भन्ने मिथ तयार भयो । कुन प्रधानमन्त्रीले चढेनन् मेलम्चीको स्मार्ट अफरोड गाडी ? मन्त्रीहरू आफैंले मेलम्चीको गाडी नचढेर प्रधानमन्त्रीहरूलाई चढाए । प्रधानमन्त्रीहरूले पदबाट खुस्किएपछि पनि राजाबाट बक्साएर त्यो गाडी चढिरहे नै । देशका लागि मेलम्चीको एक लिटर पानी एक करोडको गाडीभन्दा महँगो भएको छ । अहिले मेलम्ची आयोजना यथार्थमा परिणत हुने कि नहुने ? यस्तो अनिश्चयको अवस्था पनि आउन लागेको देखियो ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका छन् । उनको साथमा परिवारका सदस्य र राजनीतिक हैसियतअनुसारका कर्मचारी पनि छन् । परिवारमा प्रम ओली र श्रीमती ओली गरी दुई जना मात्रै छन् । अरू कर्मचारी नै हुन् । स्वास्थ्य परीक्षणपश्चात् प्रम ओलीले सिंगापुरमा आराम गर्नेछन् । उनी प्रधानमन्त्री नेपालका भए पनि सिंगापुरमा आराम गर्छन् । यो नै हो, उनको विशेषता ।
दुबईबाट आएको सुन काठमाडौं विमानस्थलमा हराउँछ र दुबई विमानस्थलमा भेटिन्छ । हिजोआज दिल्ली देश केन्द्रित भएको छ । दुबई नेपाली राजनीतिको हब ।
नेपालमा जति पनि प्रधानमन्त्री भएका छन्, तीमध्ये नब्बे प्रतिशतले नेपाल बाहिरै आराम फर्माएका छन् । उनीहरूको भाग्यमा लेखिएको कुराजस्तै छ यो । प्रम ओलीका सन्दर्भमा उनी थप केही दिन सिंगापुरमै स्वास्थ्योपचार गराएर बस्न सक्छन् । उनलाई नेपाल फर्किने हतारो छैन । हतार गर्नु पनि हुँदैन । ज्यानभन्दा कण्ठ प्यारो पक्कै हुँदैन । ज्यान छ र पो कण्ठ पनि छ !
गम्भीर बिरामी परेकी पत्नी सीतादेवीको मन बहलाउन उनलाई शेख र अमिरहरूको शहर दुबई घुमाएर प्रचण्ड शुक्रबार राति काठमाडौं फर्किए । दुबईको विलासपूर्ण वातावरणमा पनि सीतादेवीको मन प्रफुल्ल भएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुबईमा कुन्नि के छनक पाए ! आउँदा आउँदै ‘सिंहासन खाली गर, जनता आइरहेका छन्’ को शैलीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई ललकार्दै प्रश्न गरे, ‘नागार्जुनमा बस्ने मन छ कि छैन ?’ प्रचण्डको यो ललकार यही समयमा किन आयो ? यो त्यत्तिकै आएको पक्कै होइन । दुबई अहिले नेपाली राजनीति र अर्थनीतिको ‘हब’ बन्दै गएको छ ।
विगत केही समयदेखि राजा ज्ञानेन्द्रका प्रजावत्सलहरूको एउटा समूहले हल्ला मच्चाइरहेको छ– राजा आऊ देश बचाऊ । अनौठो कुरा प्रजावत्सलहरूको यो समूहले अहिलेको सरकारसँग नजिकैको तादात्म्य राख्छ । तर, प्रचण्डको चाहिँ खेदो खन्छ । उनीहरूको विचारमा प्रचण्ड बागी हुन् । उनले राजासँग बृहत् शान्ति सम्झौता नगरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न दलको गठबन्धनसँग सम्झौता गरे । यो पनि एक हिसाबको तर्क नै हो ।
नेपालको राजनीतिमा यस्ता तर्कको महत्त्व र मान्यता छ किनभने यो देशको राजनीतिलाई सदाकाल हल्लाले निर्देशित गरेको छ । हल्ला गर्नेले त हल्लाको घुसपैठ यतिसम्म गर्न थालेका छन् कि गल्लीगल्लीका ग्वारामरी पसलमा हल्ला चलाइएको छ– आउँदो १ असोजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राज्य फिर्ता लिँदै छन् र दशैंको महाष्टमीको दिन आफैं राज्याभिषेक गर्दै छन् ।
त्यसो भयो भने होला के त ? प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धमा राज्य र विद्रोहीको बन्दुकले चेपिएर सत्र हजारको ज्यान गएको दाबी मानवअधिकारवादीले मण्डल क्षेत्रमा संकेत पाटीमा लेखेर गरेका थिए । समय त्यो द्वन्द्वभन्दा धेरै अघि बढिसकेको छ । प्रजावत्सलहरूले हल्ला गरेजस्तो घटना भएको खण्डमा अरु कति हजार मानिसको सर्वनाश हुनेछ, कसैले भन्न सक्दैन ।
अहिले राज्यमा आगो बलेको छ । एकातिर मेलम्चीको चिसो पानीको प्रभाव कम हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका परिणाम स्पष्ट रूपमा देखा पर्दै छन् । त्यसको असर पूर्वराजालाई प्रजावत्सलका रुपमा मान्ने प्रजावत्सलहरूमा बढी नै देखिएको छ । प्रजावत्सलहरूको दिमागमा पसेको गर्मी ओर्लिएन भने हुने नहुने सबै कुरा हुन सक्ने सम्भावना छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २१, २०७६, ०४:०८:००
कालापानी, कतार र कोहिमा
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र एउटा यक्ष प्रश्न
राष्ट्रपति सीको अकाट्य कुरा
पत्रकारको योग्यता र पत्रकारिताको लाइसेन्स